Osolwa ngokubulala izimfene zase-Uganda Angazithola Esejele
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zase-Uganda » Osolwa ngokubulala izimfene zase-Uganda Angazithola Esejele
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ubugebengu • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba zase-Uganda
Isithombe sihlonishwa yi-Association for Conservation of Bugoma Forest
I-Uganda Wildlife Authority (UWA) ibhalisele impumelelo ophenyweni nasekuboshweni kwabazingeli abangekho emthethweni abasolwa ngokubulala izimfene ezi-2 eBugoma Forest naseKabwoya Wildlife Reserve ngokuboshwa kwalowo osolwa njengomholi weringi u-Yafesi Baguma, oneminyaka engu-36 ubudala.
UYafesi Baguma ungumzingeli owaziwayo ngokungemthetho obesegcwele amathafa kulandela ukuboshwa kozakwabo ngenyanga edlule. Ubesohlwini olufunwayo lwezigebengu okusolwa ukuthi ziyingxenye yabantu aba-5 ababulala izimfene ezi-2 ngoSepthemba 2021.
Lokhu kulandela ukutholwa okunyantisayo kwezimfene ezi-2 ezatholwa ithimba lokuqapha elivela ku-Association for the Conservation of Bugoma Forest (ACBF) ngoSepthemba 27, 2021, ngesikhathi lihlola ukucekelwa phansi okudalwe abagawuli bemithi.
Umkhankaso wafinyelela ku-Baguma ngoJanuwari 10, 2022, owaphetha ngokuboshwa kwakhe ngempumelelo, ulandele indlebe nomkhankaso ohlangene wabasebenzi be-UWA namaphoyisa ase-Uganda. U-Baguma watholwa esigodini saseKakindo esifundeni saseKakumiro, esiqhele ngamakhilomitha angu-104 ukusuka e-Kabwoya Wildlife Reserve lapho ayebalekele khona ezinyangeni ezi-4 ezedlule ngemva kokubulala izimfene ezi-2. UBaguma wayeshiye umuzi wakhe osesigodini saseNyaigugu, esifunda saseKimbugu, esifundeni saseKabwoya, esifundeni sase Kikuube. NgoSepthemba 27, 2021, uBaguma nabanye abangu-3 - uNabasa Isiah, iminyaka engu-27; uTumuhairwa John, oneminyaka engu-22; kanye no-Baseka Eric, oneminyaka engama-25 - kusolwa ukuthi babulala izimfene ezi-2. Aba-3 baboshiwe mayelana necala elifanayo.
Ngokwesitatimende esikhishwe yiMenenja Yezokuxhumana e-UWA, u-Bashir Hangi, sangoJanuwari 10, 2022, “uBaguma okwamanje uthuthelwa eKampala Central Station esuka lapho ezovela khona phambi kweNkantolo Yezabasebenzi, Yamazinga Nezilwane Zasendle futhi abekwe icala lokubulala ngokungemthetho izinhlobo ezivikelwe. I-UWA izoqhubeka nokubheka umsolwa osele ukuze bonke laba abahlanu balethwe phambi komthetho ukuze baphendule amacala.” Umthetho Wezilwane Zasendle wonyaka wezi-5 uhlinzekela isigwebo sikadilikajele noma inhlawulo yezigidigidi ezingama-2019 zamasheleni e-Uganda ngamacala okubulala izilwane ezisengozini yokushabalala.
Imfihlakalo, nokho, isagubuzele ukushona kwendlovu yasehlathini esencane eyatholwa ifile emagcekeni ehlathi ngo-Agasti 28, 2021, ibukeka izacile mhlawumbe ngenxa yokuxoshwa endaweni yayo yemvelo.
I-41,144-square-hectare Ihlathi laseBugoma kube yindaba ephikiswana ngayo kusukela iBunyoro Kitara Kingdom yaqashisa amahektha ayi-5,779 ehlathi eHoima Sugar Limited ukuze kutshalwe umoba ngo-August 2016.
Abezemvelo babambene ngezingxabano zomthetho noBunyoro Kingdom kanye neNational Environment Management Authority (NEMA) ngokukhipha ngokushesha isitifiketi sokuhlolwa kwe-Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) kwa-Hoima Sugar ngaphandle kwenqubo efanele okuhlanganisa nokulalelwa komphakathi okuhloswe ukuthi kube nemikhawulo ye-COVID-19.
Ingcindezi engapheli evela ezinhlanganweni zabameli ifinyelele umvuthwandaba ngokuthi uJustice Musa Ssekaana, iNhloko Yenkantolo Ephakeme Yophiko Lwezomphakathi eKampala, wahoxa ngoDisemba 8, 2021, ekulaleleni icala lakamuva elifakwe yi-Resource Agent Africa (RRA), i-Uganda Environment Shield. , kanye ne-Uganda Law Society ngokumelene ne-Hoima Sugar, i-NEMA, nabanye abanelungelo lokuhlanza amandla kanye nesudu yemvelo enempilo.
Lokhu kwabangela ukuthi izishoshovu zishaye ihlombe izishoshovu ezibize isithangami sabezindaba zifuna ukubuyiselwa kwehlathi elicekeleke phansi. Lezi zihlanganisa Climate Action Network Uganda (CANU), Association for The Conservation of Bugoma Forest (ACBF), Africa Institute for Energy and Governance (AFIEGO), National Association of Professional Environmentalists (NAPE), Water and Environment Media Network (WEMNET), Jane I-Goodall Institute, i-Association of Uganda Tour Operators (AUTO), Tree Talk Plus, Association of Scouts of Uganda, Inter-Generational Agenda On Climate Change (IGACC), kanye Nedeski Lesimo Sezulu eBuganda Kingdom. Isishoshovu sokuguquka kwesimo sezulu, u-Vanesa Nakate, osanda kuhlanganyela engqungqutheleni ye-COP 26 e-Glasgow, e-Scotland, usanda kufaka izwi lakhe emkhankasweni we-#saveBugomaForest.
Isiphithiphithi sakamuva silandela ukuqoshwa kwamatshe aphawuliwe ngoDisemba avulwa kabusha ngokuhlanganyela ngemuva kokuthi uKhomishana wezoMhlaba nokuhlola u-Wilson Ogalo, eyalele ama-surveyers ukuthi amise umsebenzi ebeka izaba zekhefu likaKhisimusi. kuze kube nguJanuwari 17, 2022.
Itholakala esifundeni saseKikube, iBugoma Central Forest Reserve eyakhishwa okokuqala ngo-1932, iyikhaya lezinhlobo zezilwane ezincelisayo ezingama-23; izinhlobo zezinyoni ezingu-225 ezihlanganisa ama-hornbill, ama-turaco, i-Nahan's francolin, ne-green breasted pitta; izimfene ezingama-570; i-Uganda mangabey (lophocebus ugandae), izimfene ezinemisila ebomvu, izinkawu ezingama-vervet, ama-blue duiker, izingulube zasehlathini, izindlovu, izimpungushe ezinemigqa esemaceleni namakati asagolide. Leli hlathi liphinde libe nempahla ebalulekile ebalulekile eyigugu eMbusweni waseBunyoro Kitara esifundeni sase-Kyangwali, isifunda sase Kikuube, ezabuyiselwa embusweni ngokulandela Umthetho Wabaphathi Bendabuko (Ukubuyiselwa Kwempahla Nezakhiwo) ka-1993.
I-Bugoma Jungle Lodge iyona kuphela indawo yokuhlala esemngceleni wehlathi enikeza amakhefu phakathi kwe-Kibale Forest ne-Murchison Falls National Park.
Ezinye izindaba mayelana ne-Uganda
Januwari 16, 2022 ngo-07: 36